प्याकेजि and र शिपिंग: के प्रकारहरू अवस्थित छन् र कुन उत्तम हो अर्थव्यवस्था वित्त
जब तपाईंसँग व्यापार छ र तपाईंले ग्राहकहरूलाई उत्पादनहरू पठाउनु पर्दछ, तपाईंसँग सँधै ए वा बी हुँदैन। यो हो, तपाईंसँग यसलाई बाकसमा वा एउटा लिफाफामा पठाउने विकल्प छैन। वास्तवमा, त्यहाँ छ धेरै प्रकारका प्याकेजिंग, दुबै बक्सहरूमा र भित्र खामहरु को मामला मा. र समान शिपिंग विकल्पहरूको लागि जान्छ। तपाईं Correos मात्र प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न, तपाईंसँग पनि छ धेरै कुरियर कम्पनीहरू छन् कि उनीहरूका प्रापकलाई अर्डर लिन जिम्मेवार छन्।
यदि तपाईंले यसबारे सोच्न कहिल्यै रोक्नुभएन र अब तपाईं कुन प्याकेजि use्ग प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, यसको प्रयोग गर्न विभिन्न तरिकाहरू, वा विकल्पहरू तपाईंले आफ्ना उत्पादनहरू पठाउन विकल्पहरू जान्न चाहनुहुन्छ भने, हामी यहाँ तल ती सबैको बारेमा कुरा गर्छौं। यसैले, तपाईं पनि ढुवानीलाई प्रतिस्पर्धाबाट आफूलाई छुट्याउने उपायको रूपमा विचार गर्न सक्नुहुन्छ।
1 किन तरीका उत्पादनहरू पठाइन्छ भन्ने कुरामा महत्वपूर्ण छ
2 कम्पनीहरूका लागि प्याकेजि ofको प्रकारहरू
3 शिपिंग विकल्पहरू: कुन राम्रो छ?
किन तरीका उत्पादनहरू पठाइन्छ भन्ने कुरामा महत्वपूर्ण छ
जब एक व्यक्ति अनलाईन अनलाईन गर्दछ (वा कुनै अन्य माध्यमद्वारा यसलाई कुरियर वा हुलाक मार्फत घर वा कार्यालयमा प्राप्त गर्दछ), हामी जान्दछौं कि उनीहरूले हेर्न सक्ने कमसेकम प्याकेजि is हो। उनीहरूको लागि सब भन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भित्र के हो। जहाँसम्म, सत्य यो हो कि तपाईंले बनाउनु भएको "पहिलो प्रभाव" को ख्याल राख्नु भनेको भित्रबाट रक्षा गर्नु जत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ।
तसर्थ, बिभिन्न प्याकेजिagingसँग काम गर्दा यो महत्त्वपूर्ण छ तपाईलाई पठाउन चाहानुभएको उत्पादनका प्रकार अनुसार सब भन्दा उचित जो पत्ता लगाउनुहोस्; केवल गिरावट रोक्नको लागि मात्र होईन, किनकि तपाईं विस्तारको भावना सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ जुन व्यक्तिलाई फेरि खरीद गर्दा दोहोर्याउँदछ।
रंगीन बक्सहरू प्रयोग गरेर कम्पनी लोगो, वा निजीकृत रिबन (रंगीन, कम्पनीको नामको साथ, विवरण वा छविहरू आदि) व्यावहारिक विकल्पहरू हुन सक्छन्।
समस्या यो हो कि जब यो शिपिंगको कुरा आउँछ, हामी सँधै सोच्छौं कि त्यहाँ केवल दुई विकल्पहरू छन्: खाम वा बक्स। तर वास्तविकतामा, त्यहाँ अझ धेरै छन्।
कम्पनीहरूका लागि प्याकेजि ofको प्रकारहरू
कल्पना गर्नुहोस् कि तपाईंले उत्पादन पठाउनु पर्छ। सामान्य कुरा यो हो कि तपाईं यसलाई बक्समा पठाउने बारेमा सोच्नुहुन्छ र यो तर यो हो भने, यदि यो एकदम सानो छ भने बक्सको सट्टा तपाईं झोला वा लिफाफा विचार गर्न सक्नुहुनेछ। वा शायद एउटा सानो बाकस। प्याकेजि market बजारमा, त्यहाँ छनौट गर्न धेरै विकल्पहरू छन्। सामग्रीमा निर्भर गर्दै, तपाईं निम्न फेला पार्न सक्नुहुनेछ:
Pallets: तिनीहरू सब भन्दा ठूला विकल्पहरू हुन् जसले भारी सामानहरू सार्न सजिलो बनाउँदछ जबकि सबै पक्षमा सुरक्षित रहन्छ।
कन्टेनरहरू: यो विशाल स्तरको व्यापारको शिपिंग विधि हो, किनकि हामी ठूला वस्तुहरू भएका ठूला वस्तुहरूको बारेमा कुरा गरिरहेका छौं र भूमि, समुद्री वा हावाबाट माल ढुवानी गर्न प्रयोग गरिरहेका छौं।
झोला: तिनीहरू धेरै सस्तो हुन्, र ती मध्ये धेरैजसो बबल र्यापको साथ आउँदछन् भित्रबाट सुरक्षित राख्न। पछिले मूल्य थोरै बढाउछ तर प्याकेजि within भित्र ती कम खर्चिलो हुन्छन्।
खाम:लिफाफा को मामला माथिको जस्तो छ। त्यहाँ धेरै आकारहरू छन्, अधिक वा कम कडाईको साथ, भित्री र्यापको साथ भित्री रक्षा गर्न, आदि। यसको मूल्य झोलाको वरिपरि छ किनभने तिनीहरू धेरै सस्तो छन्। धेरै जसो विभिन्न तौल वा कार्डबोर्डको कागजबाट बनेका हुन्छन् (कडा वा नरम, यो मोटाईमा निर्भर गर्दछ)।
बोरा: झोलाहरू झोला वा खामहरू भन्दा ठूला हुन्छन्, र ती कागजबाट पनि बनाउन सकिन्छ, तपाईं प्राय: तिनीहरूलाई प्लास्टिक वा कपडाले बनेको पाउनुहुनेछ। यसको उद्देश्य भनेको के हो भित्र रक्षा गर्नु हो, त्यसैले किन तिनीहरू बिभिन्न तहहरू सहित बनाइन्छ जुन एकपटक भरिन्छ, बन्द हुन्छ।
फुलाउने ब्यागहरू: यो प्याकेजि्गको विशेषता छ कि यो प्रेस गरिएको हावाले फुलेको छ जब यो बन्द हुन्छ, त्यस्तो तरिकाले यसले उत्पादनहरु लाई सुरक्षा दिन्छ कि तिनीहरू कुनै पनि समयमा सर्दैनन्। जब तपाईं यसलाई खोल्नुहुन्छ, हावा उम्कन्छ र उत्पादन अक्षुण्ण छ। यो सामान्य ब्यागहरू भन्दा महँगो छ, प्रणालीको कारणले यसले बोक्छ।
बक्सहरू: बक्सहरू सम्पूर्ण विश्व हुन्। तपाईले प्राप्त गर्नु भएको साधारण कार्डबोर्ड बक्सहरू मात्र होइन, तर त्यहाँ कडा, थर्मल बक्सहरू (जुन चिसो वा ताप, मोड्युलर बक्सहरू (अर्कोलाई भित्र राख्नको लागि) का सामना गर्दछन् ... सस्तोमा आधारभूतहरू हुन्, जो ईन्फाफा र ब्यागहरूको साथ व्यवसाय द्वारा सब भन्दा बढी प्रयोग गरिन्छ।
शिपिंग विकल्पहरू: कुन राम्रो छ?
एकचोटि तपाईलाई प्याकेजि of्गका प्रकारहरू, र सस्तो विकल्पहरू जुन तपाईले छनौट गर्न सक्नुहुनेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनुभयो भने, शिपिंगले विचार गर्नुपर्ने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। किनकि त्यहाँ हुलाक कार्यालय मात्र छैन; कूरियर कम्पनीहरू पनि। र यी भित्र, त्यहाँ छनौट गर्न धेरै छन् (केवल सेयर, एमआरडब्ल्यू, कोरेओस एक्सप्रेस, नासेक्स, डीएचएल, आदि जस्ता सबै भन्दा राम्रो परिचित छन् मात्र होइन) तर त्यहाँ अरू कम कम ज्ञात छन् तर त्यो धेरै लाभदायक हुन सक्छ।
सामान्य मा, के तपाईंले खातामा लिनु पर्छ भनेको तपाईंले बेच्न लागेका उत्पादनहरूको गन्तव्य हो। यदि यो सँधै राष्ट्रिय हुन जान्छ, त्यो हो, उही देश हुँदै शिपिंग, तपाईं कम्पनीहरू छनौट गर्न सक्नुहुनेछ जुन सबै शहरहरूलाई समेट्छ र त्यो पनि तपाईंलाई राम्रो मूल्य दिन्छ; तर यदि तपाइँको लदान अन्तर्राष्ट्रिय हो, यो एक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै संग सम्झौता गर्न एक कम्पनी संग एक सम्झौता वा सहयोग स्थापना लायक छ।
सबैभन्दा सस्तो के हो? कुनै श doubt्का बिना, हुलाक कार्यालय। दिमागमा राख्नुहोस् कि यस कम्पनीसँग विकल्प छ कि स्वयं रोजगारदाता (विशेष गरी यदि तिनीहरू IAE का केही खण्डहरुमा दर्ता छन्) अधिक किफायती मूल्यमा उत्पादन पठाउन सक्छ। उदाहरण को लागी, एक पुस्तक कि तपाइँ को लागी and रeयूरो लाग्न सक्छ, यो एक व्यापारी को लागी 3०- c० सेन्ट लाग्न सक्छ। यदि हामी यसलाई प्रमाणित गर्न चाहान्छौं भने, वृद्धि एकदम उच्च छैन।
अर्कोतर्फ, कुरियरहरूको साथमा मूल्य सामान्यतया बढी हुन्छ; विशेष गरी यदि तपाईंको व्यवसायको सुरूमा तपाईंसँग धेरै अर्डरहरू छैनन्। यदि लदानको ठूलो मात्रा छ भने कम्पनीले धेरै किफायती मूल्य प्रस्ताव गर्दछ, तर प्राय: यो Correos मा मनपर्दैन।
अब दुबै मामलाहरुमा त्यहाँ फाइदा र हानिहरु छन्। उदाहरण को लागी, Correos मा तपाईसँग समस्या छ कि प्राय: उत्पादनहरू समयमै आइपुग्दैनन्, वा तिनीहरू हराउँछन्। यसै बीचमा कुरियरहरू डेलिभरीको लागि एक म्याद पूरा गर्छन्। जे होस्, यो व्यापार मा दुर्घटना पीडित बाट छुट छैन, कि यो हराएको छ, आदि।
दुई मध्ये कुन कुन राम्रो हो भन्ने जवाफ दिन जटिल छ। अधिक आर्थिक रूपमा, Correos; जति बढी कुशल, कुरियरहरू। सबै भन्दा राम्रो विकल्प? ग्राहकलाई एउटा विकल्प दिनुहोस्। यस तरिकाले, यसले पर्खने समय वा शिपिंग सेवामा भएको मूल्यमा आधारित निर्णय गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » negocios » कम्पनीहरु » प्याकेजि and र शिपिंग: के प्रकारहरू अवस्थित छन् र कुनचाहिँ सब भन्दा राम्रो हो
यारी रड्रिगुज भन्यो
उत्कृष्ट, जानकारी को लागी धन्यवाद।
यारी रोड्रिग्जलाई जवाफ दिनुहोस्